တရုတ်ဓာတ်ခွဲခန်း Polarimeter ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang တူရိယာများ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Polarimeter > Digital Enhanced Polarimeter > ဓာတ်ခွဲခန်း Polarimeter
Digipol-P930 ဓာတ်ခွဲခန်း Polarimeter သည်အရာဝတ္ထုများ၏ optical လည်ပတ်မှုကိုတိုင်းတာရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ optical အလှည့်အပြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်သီးခြားလည်ပတ်မှု၊ နိုင်ငံတကာသကြားပါဝင်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုတို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုဆေးဝါး၊ ရေနံ၊ အစားအစာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ အရသာ၊ အမွှေးအကြိုင်၊ သကြားနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်စပ်တက္ကသိုလ်များနှင့်သုတေသနဌာနများတွင်တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုကြသည်။ တိကျ။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောတိုင်းတာမှု၊ အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှုစသည်
Digipol-P930 ဓာတ်ခွဲခန်း Polarimeter is an instrument for measuring the optical rotation of substances. Through the determination of optical rotation, the specific rotation, international sugar content, concentration and purity of substances can be analyzed and determined. It is widely used in medicine, petroleum, food, chemical, flavor, fragrance, sugar and other industries and related universities and research institutes. Boasts accurate and reliable measurement, convenient operation and so on.
1. ဓာတ်ခွဲခန်း Polarimeter Introduction
၂: optical လည်ပတ်မှု၊ တိကျသောလည်ပတ်မှု/အာရုံစူးစိုက်မှု/သကြားဒီဂရီနှင့်စိတ်ကြိုက်ပုံစံများရှိသည်။
၃: LED အအေးခံမီးရင်းမြစ်သည်ရိုးရာဆိုဒီယမ်မီးခွက်နှင့် halogen tungsten မီးခွက်တို့ကိုအစားထိုးသည်။
၅: အဆင့်မျိုးစုံစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အခွင့်အာဏာကိုလွတ်လပ်စွာစီစဉ်နိုင်သည်။
၆: ၁၀ လက်မထိတွေ့အရောင်မျက်နှာပြင်၊ လူသားဆန်သည့်လုပ်ဆောင်ချက် interface
7: 21CFR လိုအပ်ချက်များ (အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်၊ အချက်အလက်ခြေရာခံနိုင်ခြင်း၊ စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်း၊ အချက်အလက်ဆန့်ကျင်မှုနှင့်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ) ကိုလိုက်နာပါ။
၈: GLP GMP အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သတ်မှတ်ချက်များကိုအပြည့်အဝလိုက်နာပါ။
2. ဓာတ်ခွဲခန်း Polarimeter Parameter
လှည့်ခြင်း၊ တိကျသောကောက်ကောက်၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ သကြားပါဝင်မှုနှင့်စိတ်ကြိုက်ဖော်မြူလာ
LED အအေးအလင်းအရင်းအမြစ် + မြင့်မားသောတိကျသောစွက်ဖက်မှုစစ်ထုတ်ခြင်း
စမ်းသပ် function ကို
Optical လည်ပတ်± 90 °
Z အတွက်သကြား± 259 °
± 0.002 ဒီဂရီ
0.002 ° (Optical လည်ပတ်မှု)
10â„ ƒ-60â„ ƒ (Peltier)
± ၀.၀၃â„ ƒ
၁၀.၄ လက်မ TFT true color touch screen
၂၀၀ မီလီမီတာ၊ ၁၀၀ မီလီမီတာသာမန်အမျိုးအစား၊ ၁၀၀ မီလီမီတာအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအမျိုးအစား (အရှည်အမျိုးမျိုးရွေးချယ်နိုင်သော Hastelloy အလွိုင်းအပူချိန်ထိန်းချုပ်ပြွန်)
YES (စံ ၆ လုံးပါပိုက်နှင့်စံ)
ယေဘူယျရည်ရွယ်ချက်သုံးပရင်တာ၊ WiFi ပုံနှိပ်ခြင်း (HP ပရင်တာနှင့်ပုံမှန်)
YES / အဆင့်လေးဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှု
စွမ်းရည် ၅၀ မီလီမီတာနှင့် ၂၀၀ မီလီမီတာရှည်တိုင်းအပူချိန်ထိန်းပြွန်၊ မောက်စ်၊ ကီးဘုတ်ချိတ်ဆက်မှု၊ ယေဘူယျရည်ရွယ်ချက်ပရင်တာ/ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ပရင်တာ
220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz, 250W ဖြစ်သည်
3. ဓာတ်ခွဲခန်း Polarimeter Feature
1. ဓာတ်ခွဲခန်း Polarimeter is widely used in medicine, food, organic chemical industry and other fields.
၇။ ကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဆေးရုံများတွင်လက်တွေ့ဆီးချိုရောဂါကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
Ultra long life light source ဖြစ်သည်
Jiahang ဓာတ်ခွဲခန်း Polarimeter has obtained CE certification, TART certification, ISO quality management system certification, more than 10 software copyrights and multiple patents to ensure that each instrument has stable performance and excellent quality.
ထုတ်လုပ်သူသည်အခမဲ့တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တာ ၀ န်ယူခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်၊ အသုံးပြုသူသည်ဈေးပြိုင်စာချုပ်နှင့်ထုတ်ကုန်နည်းပညာစံနှုန်းများအတိုင်းစစ်ဆေးပြီးလက်ခံရမည်ဖြစ်ပြီးတစ်သက်တာအာမခံကိုပုံမှန်ထိန်းသိမ်းရမည်။
လူ ဦး ရေ ၂ ဦး အတွက်တပ်ဆင်မှုနေရာ၌သုံးစွဲသူများအတွက်အခမဲ့ ၀ န်ထမ်းများအားလေ့ကျင့်ပေးပါ။
မေး။ ။How many years have your company made ဓာတ်ခွဲခန်း Polarimeter?
hot Tags:: ဓာတ်ခွဲခန်း Polarimeter၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးပေါ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE